Soosaarayaasha dhaldhalaalka dhaldhalaalka ee Custom Sameeyay HK Global GEO park Logo Lapel Pin
Habka farsamada: wax taaj oo kale, dhinta-shubay, qiraan, dhaldhalaalka jilicsan, dahaadhay, QC, baakadaha.
Adeegga Hal-ku-joogga ah
Waxaan kuu samayn karnaa farshaxan soo saar adiga oo raacaya feylasha soo socda: JPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, iwm
3. ka waran qiimaha?
Qiimayaashu waxay ku xiran yihiin naqshado kala duwan, QTY iyo farsamada gacanta. Waanu kuu soo qaadan doonnaa isla marka aad hesho baaritaanka.
Waqtiga wax soo saarku wuxuu kuxiranyahay tirada dalabka iyo farsamada kala duwan.
Caadi ahaan, waxay ku dhowdahay 10 maalmood oo loogu talagalay soo-qaadista tijaabada ka dib marka farshaxanka la oggolaado; 15-20 maalmood wax soo saarka badan.
Kahor rarka, waxaan ku tusi doonaa sawirro iyo fiidiyowyo kormeerka oo dhan ah, wixii dhibaato ah, waan hagaajin karnaa kahor rarka.
Haddii ay jirto wax dhibaato ah oo ku saabsan alaabooyinka aad heshay, fadlan si xor ah noo sheeg, adeeggayaga iibka ka dib ayaa sida ugu fiican u xallin doona adiga.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale ku sameyn karnaa Amarka Hubinta Ganacsiga ee Alibaba, si amar kasta uu u hoos yimaado ilaalinta Alibaba, oo siisa dareen ammaan labada dhinacba.
Waxaan aqbali karnaa T / T, PayPal, WU, MG, iwm 50% dhigaalka si aan u bilowno amarka, 50% dheelitirka waa la dhammeeyaa ka hor rarka. Shuruudo kale oo kasta oo ka mid ah shuruudaha Lacag bixinta waa laga wada xaajoon karaa.
Hore: Custom Enamel Pin Maker Naqshadeynta Naqshadeynta Ubaxa Jaalaha ah iyo Caleenta Cagaaran ee Caleenta jilicsan
Xiga: Hard Enamel Pin Design Naqshad Tixraac ah
Musmaarradii Lapel Canadian
Xididdada Lapel Cool
Dhaldhalaalka dhaldhalaalka Lapel
Calaamadaha Birta Biin
Badmaaxiinta Moon Enamel Pin
Dhaldhalaalka Custom Pin Zinc Daawaha sameeyey Nickel Platin ...